Fernando Torres nwata Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Welcome!Abanye n'ime akaụntụ gị
Chefuru okwuntughe gị?
Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Fernando Torres nwata Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ
Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'El Nino. Anyị Fernando Torres Storymụaka Akụkọ na Iwepụ Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Spanish Spanish Legend Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya na eziokwu ya na OFF-Pitch ndụ ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere oke egwu ya na oke ala mana ole na ole na-ele Fernando Torres Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Jordan Henderson Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
Akụkọ Fernando Torres nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Fernando José Torres Sanz mụrụ na Ụbọchị 20th nke March 1984 na Fuenlabrada, obodo dị na mpụga isi obodo Spain Madrid. A mụrụ ya dị ka nwa ikpeazụ a mụrụ na nwa nke ụlọ ahụ nye nne ya, Flori Sanz Torres na nna, José Torres.
Torres toro na Fuenlabrada, obodo ebe Real Madrid bụ isi ọgbakọ nke ndị bi na ya kwadoro. Otú ọ dị, ọ họọrọ Athletico. Onye egwu bọọlụ ahụ gbara bọọlụ mgbe ọ dị afọ 5 wee banye n'otu ọgbakọ Parque 84.
Hector Bellerin Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ọ ga-eju gị anya ịmata na ọnọdụ mbụ Torres abụghị nke nke onye na-eti ihe kama ọ bụ onye na-eche nche. Ọ bụ otu ọrụ nwanne ya nwoke nke mbụ mere. Torres nọgidere n'ọkwá ahụ ruo afọ 7 mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gbanwere ọrụ onye ahụ.
Nna ya, José Torres, zụkwara ya na nzuzo n'oge ọ bụ nwata. Ka ọ na-eme nke ahụ, nne ya, Flori Sanz, soro ya gaa njem ọzụzụ kwa ụbọchị.
Rhian Brewster Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Nna nna ya abughi onye nwere obi uto n'egwuregwu football kama o nwere obi uto na ya bu onye Atlético Madrid. N'ezie, Torres ketara ịhụnanya maka Athletico n'aka ya.
Mgbe ọ dị afọ asatọ, ọ malitere igwu egwu mgbe niile dị ka onye na-egwu egwuregwu na ime ụlọ maka ụlọ agbata obi, Mario's Holland, iji ihe odide sitere na anime Captain Tsubasa dị ka mmụọ nsọ ya na-achị ndị ya na ibe ya na-ebuli elu.
Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
Afọ abụọ mgbe e mesịrị, 10 dị afọ, ọ gara n'ihu na otu òtù 11, n'akụkụ Rayo 13. O meriri ihe mgbaru ọsọ 55 na oge na ọ bụ otu n'ime ndị ọrụ Rayo 13 atọ iji mee Atletico ikpe. Ọ masịrị ndị na-egwu egwuregwu ma sonyere usoro ntorobịa nke klọb mgbe ọ dị afọ 11 na 1995.
Nke a bụ mgbe njem njem nke Athletico Madrid malitere. Torres toro site n'ọkwá ha ma merie nnukwu trophies dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a.
Nathan Ake Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ihe omuma
Ọ na-ebuli elu na-ahụ ya site na Liverpool Scouts. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Olalla Domínguez? Fernando Torres hụrụ n'anya:
Fernando zutere ịhụnanya maka ndụ ya, Olalla Domínguez Liste n'afọ 2001 nke bụ afọ mbụ nke ịbụ onye ọkpụkpọ egwuregwu na Athletico.
Ha zutere na Galician osimiri obodo nke Estorde, Cee, ebe Torres ga-aga ezumike ezumike kwa afọ iji gbanahụ obodo n'obodo isi obodo Spanish.
Naby Keita Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Nwunye Fernando Torres, Olalla Dominguez abụghị ụdị WAG gị. Ọ bụ ihere ma nwee mmasị ịnọpụ iche.
Agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ na-abụkarị ihe ngosi. A na-eji ọtụtụ puku pound na-achọ ebe kachasị mma na nri nri. Karia nke a, uwe kacha mma na uwe. Mana Fernando Torres abughi ndi nlekota ndi ozo.
Torres lụrụ nwa agbọghọ dị obi ya bụ Olalla Dominguez, n'ememe onwe ya n'ihu naanị 2 ọbịa na obere ụlọ ezumezu El Escorial, n'ebe ugwu nke Madrid. Ọ bụ ihe dị nnọọ ukwuu site na ememe ndị a na-eme ememe ndị Beckhams, Rooneyys na Coles họọrọ.
Pedri Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Dominguez nwere mmasị ịnọ na-eji ejiji ma na-amụ ihe n'asụsụ Spanish dị ka University Open mgbe ha lụrụ. Dominguez bụ nne nke ụmụ abụọ, nwa Nora mụrụ na 2009, na nwa Leo mụrụ na 2010.
Xabi Alonso, ezigbo enyi Torres, na onye isi Liverpool Steven Gerrard niile letara di na nwunye ahụ n'ụlọ ọgwụ n'oge amụrụ nwa ha nwoke. N'okpuru bụ foto nke Fernando Torres na ụmụ ya mara mma dị ka n'oge ya na Chelsea.
Iker Casillas Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
N'oge na-adịbeghị anya, n'oge nlọghachi ikpeazụ ya na Athletico Madrid. Nwunye Fernando Torres, Olalla Dominguez, nwere nwa ya nke atọ na nwa ya nke abụọ, Elsa Torres. N'okpuru ebe a bụ Else, nna ya na enyi ya, Antione Griezmann. Fernando Torres nwa, na-ele anya dị jụụ na ntakịrị obi ụtọ.
Fernando Torres Ndụ Ezinụlọ:
N'iburu afọ ndụ ya na ịbụ onye ikpeazụ nke ezinụlọ ya, a na-atụ anya na nne na nna Fernando Torres nwere ike ịbụ 60. Ihe ndị a bụ foto nne ya, Flori Sanz Torres gosipụtara oke ọ hụrụ nwa ya n'anya.
Jonjo Shelvey Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Foto dị n'okpuru ebe a na-egosi nna ya, José Torres (n'aka ekpe), nna nna (etiti) na nne, Flori Sanz (n'aka nri).
NNE: A mụrụ Fernando Torres nwanne Israel n'afọ 1977. Ọ bụ nwa nke abụọ nke ndị ezinụlọ ya, ya bụ naanị nwanne nwoke Fernando Torres. N'okpuru bụ foto nke Isreal Torres na nwanne ya nwoke bụ Fernando.
Isreal Torres bụ 6 afọ karịa Fernando.
Xavi Hernandez Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
SISTER: Nwanne nwanyị Fernando Torres María Paz mụrụ na afọ 1976 nke mere ya nwa mbụ na ada nke ezinụlọ Torres. N'okpuru ebe a bụ nwa agbọghọ na-eto eto bụ Maria Paz Torres.
Maria Paz Torres na nwanne ya nwoke Fernando. N'agbanyeghị na ọ bụ nwata, ọ bụ afọ 7 karịa nwanne ya nwoke bụ Fernando.
Fernando Torres Ndụ Nke Onwe:
Fernando Torres nwere àgwà ndị a gbasara ndụ ya.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-emeghe Ihe Ndị Na-akpata Ihe Ndị Na-akpata
Ike: O nwere ọmịiko, nkà, enweghi nghọta, dị nwayọọ, maara ihe na egwu egwu.
Ajọ: Fernando nwere ike ịtụ egwu, tụkwasị obi kpamkpam, na-ewute ya ma nwee ọchịchọ ịgbanahụ eziokwu.
Ihe Fernando Torres nwere mmasị: Fernando Torres hụrụ n'anya ịnọ naanị ya, karịa; ihi ụra, nri, ngwa / egwuregwu, ihe nkiri, egwu, ịhụnanya, ịga na Wikipedia, na-edekọ ozi ịntanetị na igwu mmiri.
Ihe Fernando Torres achọghị: Ndị na-azọrọ na ha maara na ha nile, ụdị obi ọjọọ ọ bụla, na-akatọ na ịhụ oge gara aga na-alọghachi ka ha nọrọ ya nso.
Dejan Lovren Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ
Na nchịkọta, Fernando Torres nwere ezigbo enyi ma na-ahụkarị na ndị ọrụ dị iche iche. Ọ dị njikere mgbe niile inyere ndị ọzọ aka, n'atụghị anya inweta ihe ọ bụla.
Fernando Torres Eziokwu Na-adịghị Agbanwe Eziokwu - Bromance na David Luis:
O nwere ike ịbụ na a chụpụrụ ya "Na-emetụ Fernando Torres aka maka ọdịmma", ma emume ahụ David Luiz mere tupu Chelsea ejiri 5-0 Champions League merie Genk - nke Torres meriri ugboro abụọ - gbanyere mkpọrọgwụ karịa na okwukwe David Luiz karịa ụfọdụ nkwenkwe ụgha tupu oge.
Gerard Deulofeu Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nso
N'otu oge na Chelsea, Torres gara 903 nkeji na-enweghị isi ihe mgbaru ọsọ tupu ọgụ megide West Ham kwụsịrị okwu ahụ. A mara ihe mgbaru ọsọ ya nwere ike ikpe ekpere mgbe ekpere dị n'okpuru.
David Luiz kwuru otu oge…, “Okwukwe m na-enye m nkwenye na m nwere ike ịpụ gaa rụọ ma nyere ndị egwuregwu ndị ọzọ aka gụnyere onye iro m. Ọ na-enye m ume na mmụọ nsọ. ” O mechara gbakwụnye, “Ihe niile dị ndụ bụ nke Chineke. Edebela nzube anyị. ”
N'ebe a, anyị na-enye gị foto mix nke epic bromance n'etiti Fernando Torres na David Luiz.
Cesc Fabregas Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma
Eziokwu Fernando Torres:
Fernando Torres bụ onye ukwu nke Rabona. Nke a bụ usoro ịgba egwu football a na-agbachi ụkwụ ụkwụ ya n'azụ ụkwụ kwụ ọtọ-n'ụzọ dị irè ma ụkwụ gafee.
Mkpakpọ nke ime mmụọ nke ya na David Luiz mere ozugbo ka ịntanetị na-ere ọkụ.
A na-akpọkwa Fernando Torres 'Mr. Nri nri '.
N'etiti mba Spanish, ezigbo enyi ya bụ David Villa.
David De Gea Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Fernando Torres hụrụ ihe ịma aka mmiri.
Eziokwu banyere Mr:
Torres hụrụ nri na nri na kichin. Ọ bụ ezigbo onye na-eri nri na mmiri, ọ na-ahụkwa ísì nke nne nne nwunye ya na-esi na ya. Ma nri nri ya kachasị mma bụ Chicken Curry. Otu n'ime ihe ọjọọ ọ na-ekwenye bụ na ọ na-enwe mmasị ụdị swiit niile.
Kieran Trippier Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Fernando Torres Ihe nkiri na egwu:
N'ịbụ ndị na-esi nri ma na-eri nri, Torres bụkwa nnukwu onye nkiri nke fim. Ndụ bụ ihe nkiri magburu onwe ya, ọ kwenyere na ọ na-akọwa ya, ma ànyị maara na ọ na-emekwa?
O meela ihe nkiri a na-eme na fim dị egwu - Torrente 3: El Protector, ihe nkiri Spanish nke ewepụtara na 2005. Ọzọkwa, na mgbịrịgba mgbịrịgba, dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru.
Joe Gomez Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Ọ pụtakwara n'egwú egwú maka ìgwè ahụ, "El Canto del Loco," onye na-abụ onye ndu egwú bụ Dani Martin, nwere ezigbo enyi na ya.
Ewezuga ihe nkiri, Torres na-enwekwa egwu Rock Rock. Ọ bụ ezigbo onye egwu Beatles, Kasabian na Oasis na abụ kachasị amasị ya bụ Yellow Submarine.
Fernando Torres bụkwa nnukwu onye ofufe nke Lord Of The Rings Series. Mgbe ọ bụla ọ na-eme njem, ọ na-etinye laptọọpụ ya oge niile, iji lee ihe nkiri sịnịma, usoro onyonyo- ọkacha mmasị ya bụ Lost na Mkpọrọ Mkpọrọ.
Jan Oblak Child Story Story na ihe omuma
Ogbugbu Fernando Torres:
Ink aghọwo otu n'ime ihe ndị kachasị mma ị na-ahụ n'aka ndị ịgba egwu. Ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwere akwara taa. Fernando Torres nwere tattoo atọ, ha niile nwere akụkọ na-adọrọ mmasị n'azụ ha.
Ogbugbu ya nke izizi, nke dị na ezi aka nri ya, bụ ọnụ ọgụgụ ndị Rome VII VII MMI (7 7 2001). Anyị amaghị n’ezie ihe ụbọchị ahụ pụtara mana ịkọ nkọ na-ekwu na ọ bụ ụbọchị ya na enyi nwanyị ya, Olalla ma ọ bụ ụbọchị nna nna ya nwụrụ, onye ọ hụrụ n’anya nke ukwuu.
Ụmụaka nwatakịrị a na-akpọ Raheem Akụkọ Gbasara Eziokwu
N'aka aka nri ya, o nwere akara 9 tattooed, nke pụtara n'ụzọ doro anya akara uwe elu ọ kacha eyi na egwuregwu bọọlụ.
Fernando Torres agbakwara n'aka ekpe ya, asụsụ Elvin. Ọnwụ na ogwe aka ekpe ya bụ ụdị Spanish "Fernando" na Tengwar.
Dabere na quenya101.com, enwere obere ndudue na egbu egbu. Okwesiri ka agwa iri tengwa gafere nke mbu "M" njirimara njirimara kama, ọ gafechara nke abụọ. Sergio Aguero nwetara echiche maka akpụkpọ anụ Tengwar si Torres. Aguero si egbu egbu na-agụ "Kun Aguero"Na Tengwar na aka nri ya.
Gerard Moreno Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Eziokwu nke Fernando Torres - Ngwa na Egwuregwu:
Fernando Torres bụ nerd mgbe a bịara n'ihe gbasara ngwaọrụ. Ọ hụrụ ngwa na akụrụngwa egwuregwu. Ọ bụ otu n'ime ndị kachasị akwado egwuregwu egwuregwu PlayStation.
O tinyela ụlọ ime egwuregwu atọ nke PlayStation na mpempe akwụkwọ okomoko ya - na-agbakọta ruo ,35,000 XNUMX, otu na ala ọ bụla iji mee ka ọ nọrọ.
Ọ hụrụ n'anya inwe akwụkwọ atọ nke egwuregwu PlayStation kachasị amasị ya, gụnyere Pro Evolution Soccer, Grand Theft Auto IV na Halo 3.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Fernando Torres nke Childhoodmụaka Akụkọ ya na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Atletico Madrid Football Diary
Ndị na-egwu egwuregwu Chelsea FC FC
Egwuregwu Liverpool Football
Inomụaka Angelino Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Pablo Fornals Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Sergio Reguilon Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Akụkọ akụkọ banyere Eric Garcia
Ferran Torres Akụkọ nwata na gbakwunyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ha
Marcos Llorente Childhood Story Plus Nkọwapụta Untold Biography Eziokwu
Mariano Diaz Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Dani Olmo Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Daniel Parejo Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ahụ Eke Ndụ
Rodrigo Moreno Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Na-adịghị Eke Ndụ
Ki-Jana Hoever Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Bọchị agbanweela: Machị 13, 2021
Philmụaka Nat Phillips Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Bọchị agbanweela: Machị 29, 2021
Ozan Kabak Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Bọchị agbanwee: February 27, 2021
Bọchị agbanweela: Machị 10, 2021
Bọchị gbanwee: Mee 4, 2021
Bọchị gbanwee: Mee 3, 2021
Bọchị agbanweela: Machị 15, 2021